Ukuze impi kwaba ukulwa-ngomumo, kufanele ihlelwe ngokucacile. Omunye izakhi yenhlangano yayo futhi inkampani. Kungaba owakhiwa platoons eziningana. Futhi, kungase kube namahhovisi eziningana ngaphandle kwanoma iyiphi Leli qembu elilodwa. Bangaki abantu kule nkampani, incike kuliphi izwe sikhuluma ibutho. I ahlukene kungase kudingeke linani lelehlukile amasosha ngalolo iyunithi. Futhi ahlukahlukene ukulwa izingalo ukuthi, ukuthi bangaki abantu kule nkampani, zingahluka. Ezimweni ezithile, uma sicabanga ngazo zonke izindlela ezingakhona, inani le- ingahluka ezahlukahlukene. Ngakho, ukukhuluma abantu abaningi kanjani kule nkampani, singakwazi bacacise inani labantu nambili kubantu, anamakhulu mabini.
Roth kungenzeka ingxenye Ibutho, kodwa futhi ungaba ehlukile. Futhi e oyiyo kungenzeka platoons ehlukile. Battalion - lena inombolo okungenani sesigaba, okuyinto has ekomkhulu lawo ezehlukile.
Staffing isikhundla inkampani umkhuzi - uCaptain. Olungasihlukanisa inkampani, ngokuvamile elaliholwa uMajor. Uma sikhuluma Russian amabutho ahlomile, impendulo yombuzo othi "Bangaki abantu kule nkampani zempi" kuyoba kusukela kwabaneminyaka engamashumi amathathu nanye ku indoda engamashumi amane nanye. Lona ubuncane lingakanani. I esinenjini elihamba amabutho , kule nombolo isivele ifinyelele ayisithupha ukuba eziyikhulu namashumi kwendoda eyodwa. I sisemoyeni lokushaya amasosha - amadoda angamashumi ayisishiyagalombili.
Ngo ukulwa izingalo ezihlukahlukene inkampani kungase anamagama ahlukene. Ngokwesibonelo, e ibhethri wezikhali noma mayelana lokuthi le yezezimoto elihamba amabutho ngokuthi inkampani. I isigaba abakhwele amahhashi siyafana. I amabutho umngcele kule yunithi oluhambisana eliqaphile. Kulo mBhalo, njengoba umthetho, inkampani akuyona Leli qembu, futhi emahhovisi. Umyalo ngeke ngokuvamile ezinkulu.
Ungathola okuthile okuthakazelisayo, ujike kumlando. Ngokwesibonelo, eFrance, e-izinsuku D'Artagnan njengoba sazi, bekulokhu inkampani ye Musketeers. Bangaki abantu inkampani ngaleso sikhathi? Ngiphakathi ngaphezulu noma ngaphansi, bese 330 Musketeers Royal. Le yunithi hhayi kuphela kwadingeka kwamasosha umkhuzi wawo, kodwa futhi uMgcinimafa zabo, udokotela nompristi.
Esikhathini yesimanje Russian ibutho selimise izinkampani ucwaningo ukuthi bekwi imisebenzi efanele. Bona akhiwa ikakhulu abafundi amakolishi obuchwepheshe. Izikhungo kulezi Battalion kuyobalwa njengokusoka kunenkonzo yezempi ephoqelelwe. Ukuze uthole kubo, kudingeka kudlule mncintiswano. Ngokuthakazelisayo, le sevisi nje kwezinyanga ezimbalwa. Ngemva kokuphela kwalesi sikhathi, shift elilandelayo ifika. Abafundi ukubuyela izifundo zabo, shift entsha uyaqhubeka esebenza impi.
Kukhona futhi ezinkampanini software. Zakhiwa isilawuli, ukulawula traffic Leli qembu, ukuxhumana Leli qembu, ukulwa ukwesekwa, imishini yezokuxhumana esitolo, ukulungisa kanye nesikhathi sokubuya ekhaya Leli qembu. Le nkampani inikeza ngamasevisi yesondlo. Kukhona bararulule imiraro engaba esibalulekile futhi lobuchwepheshe. Bangaki abantu kwelinye inkampani kulokhu kunzima ukusho. Ukwakheka kwalo kunqunywa ngokuyinhloko izinkinga ezibhekene it.
Handling abanganaki lomlilo - ingozi yomlilo
Negesi izikhali kanye nezinye izindlela ukuzivikela
Ubani igama lale ndoda lucky?
Biography Dmitry Gubernieva - umhlaziyi ozithandayo
Indlela thunga imvunulo knight khona ngithanda umfana othile ngezandla zakhe?